Apple ဟာ iPad များကို Storage ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပြီး ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့ ~ Today's Mobile Training & Service Center
Today's Mobile Training & Service Center
ဆုမဲပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ Ooredoo မြန်မာရဲ့ ရွှေအိမ...
Samsung Devices Factory mode error Repair on Root ...
G620s-ul00 modern repair tool
Smule Karaoke apk
Xiaomi မှ ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Mi 5s နဲ့ Mi 5s Pl...
Android ဖုန်းအတွင်း သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ apk တွေကို One...
Classic Bomber 2016 game
Android ဖုန်းတိုင်းမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ Trust Go apk...
Samsung မှ Galaxy Note7ဖုန်းတွေရဲ့ ၆၀% ကိုသာ ပြန...
Huawei Y511-T00 Flashtool Firmware
ပုံရိပ်များပေါက်ကြားလာတဲ့ HTC ရဲ့ Bolt
iOS 10.0.2 Firmware Download Links
LG ဖုန်းများအား Firmware တင်နည်း
CM Security latest apk
MTK Device တွေကို Box မသုံးပဲ Deadboot ပြန်နိုးမယ်...
Huawei G730-U00 အတွက် CWM+MIUI ROM
Samsung Grand2( SM-G7102 ) Deadboot Repair Tutor...
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Contact များကိုဖု...
တစ်နေ့တာအမောအပန်းလေးတွေကို ဟာသ video လေးတွေန့ဖြေဖေ...
Huawei ဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ FRP Unlock Tutoria...
LeEco မှ RAM 6GB နဲ့ 3.5 မီလီမီတာမပါဝင်တော့တဲ့ mod...
တရားဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် Gar Htar Daw application
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများကြား Restart & Reset
Samsung Korea ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တက်တဲ့ internet အလိုလ...
ံHuawei မှ Ascend Mate9ရဲ့ Camera နဲ့ Samsung , ...
All MTK Schematics Diagram Tool
Samsung ဖုန်းများအတွက် SBoot ဖိုင်များ
Samsung ဖုန်းများအတွက် Secret Code များ
Destiny Of Throne game
Ooredoo Sim Card များအား Online မှမှတ်ပုံတင်ပြီး ဆ...
Facebook & Messenger Latest & Old version
Samsung ဖုန်းများအတွက် FRP Reset ဖိုင်များ
Root Explorer နှင် IMEI restore ပြုလုပ်ခြင်း
MTK Device တွေမှာဖြစ်တက်တဲ့ Tool DL image Fail / u...
Clash Royale update version
Google Drive မှရယူနိုင်မဲ့ SamFirm.net မှ samsung ...
Android ဖုန်းများမှာ ဖျက်လိုက်မိတဲ့ မက်ဆေ့ ( SMS )...
Clone ဖုန်းအချို့မှာဖြစ်တက်တဲ့ * တို့ # တို့ကို နှ...
Sony မှ ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Xperia X-Compact ဖုန...
Samsung ဖုန်းများအတွက် Deadboot ပြန်နှိူးတဲ့နေရာမှ...
Smart Phone များမှာပါတဲ့ “USB Tethering” အကြောင်း
Samsung Galaxy Tab3( SM-T311 ) v4.4.2 Firmware
အမေရိကန်သားတစ်ဦးမှ Samsung အား တရားစွဲဆို
နေ့စဉ်သုံးထားသမျှ internet unit များကိုကြညိ့နိုင်မ...
မြန်မာ ဂဏာန်းပေါင်းစက် apk
Samsung Galaxy J5 Clone ( J500H-DS v4.4.2 ) MT6572...
Huawei MTK ဖုန်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ new:risk old:ris...
iOS 10 မှာ 'Press Home to Unlock' ကို ပိတ်ထားနည်း
အပစ်အခတ်ဝါသနာပါသူတွေအတွက် Sniper 3D Game
LG ဖုန်းများအတွက် Firmware ဖိုင်ရှာဖွေနည်း
Xiaomi ဖုန်းများအား Font Style change နည်း PDF
အပစ်အခတ် game တွေကိုစိတ်ဝင်စားတက်သူတွေအတွက် Specia...
English Myanmar Translator
Youtube မှာတင်ထားတဲ့ MP4 ဖိုင်တွေကို Mp3 ဖိုင်အဖြစ...
MM Unlocker Box 1.0 is Out!!
Android device များ Root လုပ်ပြီးသုံးခြင်းဖြင့် ဘာ...
Xiaomi ဖုန်းအချို့မှာ ဘက်ထ္ထရီပေါက်ကွဲမှု့များ ဖြစ်...
iDevice များ iOS 10 သို့ update ပြုလုပ်နိုင်ပြီ
MTK imei repair apk
KKP K601 Display error Fix
Apple မှ ၁၈၉ ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချမဲ့ Original Apple Wa...
မှတ်စုများမှတ်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံး Note Everything...
All Root apks
Y625-U32 IMEI Fixer Toolkit
Google Play Store ကနေအခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ Video Editor...
Mp3 , Mp4 ဖိုင်များကို online ပေါ်ကနေ Format ပြောင်...
KKP K904 အတွက် Firmware
SC8620 အမျိူးအစားသုံးထားတဲ့ ဖုန်းများကို အလွယ်ကူဆု...
Samsung မှတရားဝင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Android ခေါက်ဖုန...
ဖုန်းများတွင်ပါဝင်သော Store account များကိုအသုံးပြ...
SPD ဖုန်းတွေမှာ firmware ကို Back up ပြုလုပ်နိုင်မ...
Apple ဟာ iPad များကို Storage ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပြီး...
Pokemon သမားတွေအတွက် ဖုန်းထုတ်ပြီးအကောင်ဖမ်းစရာမလု...
Hol U10 – Hol U19 4GB – 8GB – 16GB LCD / IMEI / De...
Android ရဲ့ version 6.0 Nougat စနစ်ကိုသုံးထားတဲ့ ပ...
Speadrum နဲ့ Qualcomm အမျိူးအစားဖုန်းများအတွက် Har...
HW Theme Noti Fixer apk
Meizu M2 Note Signed SP Flashtool Firmware
အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်အကျယ်နဲ့ Me...
Facebook မှာ Video တွေ Auto-play ဖြစ်နေရင် ပိတ်နည်...
Redmi Note 3(Pro) Qualcomm Fastboot Firmware ရေးနည...
Galaxy A9 Pro SM-A910F Firmware
Huawei ဖုန်းများ Board Firmware တင်နည်း
Nokia ရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု့တွေကို အထောက်...
Google ရဲ့ Pixel ဖုန်းအသစ် အောက်တိုဘာလ ၄ရက်နေ့တွင်...
Galxy A9 Pro SM-A910F ကို Root ပြုလုပ်နည်း
MTK device များ firmware တင်ရင် SP Flashtool မှြာေ...
ဖုန်းမော်ဒယ် တော်တော်များများရဲ့ firmware များကို ...
Meizu ဖုန်းများကို မြန်မာစာဖောင့်ထည့်သွင်းနိုင်မဲ့...
Xiaomi Mi Note များရဲ့ Secret code များ
Samsung ဖုန်းများရဲ့ Secret code များ
Apple ဟာ iPad များကို Storage ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပြီး ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့
9:07 AM today's Blog No comments
Apple ဟာသူတို့ရဲ့ အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ iPhone7&7Plus တွေအပြင်
iPad တွေကိုပါထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေကိုပြောင်းလဲမှု့တွေ
ပြုလုပ်ပေးခဲ့လည်းဆိုရင်တော့ iPad အသီးသီးရဲ့ Storage ပါဝင်မှု့ပမာဏကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး
Apple ဟာ အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ 16GB မော်ဒယ်ကိုပဲ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ 32GB အထိ Storage ပမာဏကို အနည်းဆုံးမြှင့်တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် iPad Pros တွေကိုလည်း ယခုအခါမှာ Storage ပမာဏ 256GB အထိ မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ယခင်ကထက်တော့ ဈေးနှုန်းပိုမိုလာမယ့် ဟန်ရှိပါတယ်။
နည်းနည်းပိုပြီး ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ ဈေးနှုန်းအတက်အကျဟာ မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်နိုင်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ iPad mini2ဟာ WiFi သို့မဟုတ် Cellular Mode ပေါ်မူတည်ပြီး ယခုအခါမှာ 32GB Storage ကို ဒေါ်လာ ၂၆၉ကနေ ဒေါ်လာ ၃၉၉ ထိရှိနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi-only model နဲ့ iPad Air2နဲ့ iPad mini4တို့ဟာ 32GB Storage အတွက် ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၃၉၉ကနေ 128GB Storage အတွက် ဒေါ်လာ ၄၉၉အကြား ရှိနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာသင့်ရဲ့ Storage ပမာဏရွေးချယ်ပုံပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် iPad Pro တွေကတော့ Storage Option တိုင်းမှာ ဈေးနှုန်းကျသွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ အမြင့်ဆုံး ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ ၁၂.၉လက်မ မျက်နှာပြင်နဲ့ 256GB WiFi ဗားရှင်းကို ယခင်ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၁၀၉၉ကနေ ဒေါ်လာ ၉၉၉နဲ့ လျှော့ပြီး ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ iPad တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားပုံကို အောက်ပါပုံမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
9008 mode ဝင်ရန် Test Point များစုစည်းမှု့
9008 mode ဝင်ရန်အတွက် ဖုန်းအမျိူးအစားနဲ့မူတည်ပြီး Test Point များဟာလည်းကွဲပြားမှု့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Test Point လေးတွေစုစည်းထားတာလေး...
Ooredoo နှင့် Telenor Sim Card များကို Online ကနေမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီ
Ooredoo နှင့် Telenor Sim Card ကိုင်ဆောင်သူများအနေနဲ့ online ကနေ မှတ်ပုံတင် ( Register ) ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ပြုလုပ်ရတာလည်းမခက်ပါဘ...
J2 Prime SM-G532G Frp Lock ကျော်နည်း
ဒီ Model ကတော့ Internet Browser ပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့ ဒါဆိုရင် ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ Frp Lock Rem...
Qualcommm Phone များ Rom0backup လုပ်နည်း နဲ့Restore လုပ်နည်း အမျိုးမျိုး
service သမားများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Qualcommm Phone များ Rom0backup လုပ်နည်း နဲ့Restore လုပ်နည်း အမျိုးမျိူးကို တင...
Huawei Y6 အတွက် Way အစုံ
Huawei Y6 အတွက် ဘာညာ way တွေအစုံတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေကတော့ service သမားတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရာလေးတွေပါ။ ပေးထာ...
Android version 7.0 - 7.1.1 Pure Base For Zawgyi install
Android version 7.0 နဲ့ 7.1.1 Pure Base တွေအတွက် Custom Recovery ကနေ install ပေးဖို့ ZawgyiBase Font zip ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြု ကြ...
Xiaomi ဖုန်းများအတွက်တော့ အဖိုးတန် apk လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ apk လေးကနေဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် Zawgyi X1 ဆိ...
Xiaomi Mi Account Remove bat File
Xiaomi Mi ဖုန်းများအတွက် Account Remove bat file လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ bat file လေးကနေပြီး အောက်ပါ model များကို support ပေးပါတယ...
MTK smart phone တွေကို imei ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဖုန်းထဲမှာတင် apk လေးနဲ့ပြန်လည် Repair လုပ်နိုင်ရန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ apk လေးရဲ့နံမည်...
Huawei G620s-Ul00 အတွက် modern repair Tool လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Tool လေးကနေပြီး G620s-Ul00 မှာ IMEI ပျောက်တာတို့ Sim invalid ...
Copyright © 2011 Today's Mobile Training & Service Center | Powered by Blogger